Maitiro ekutumira iCloud zvinongedzo kuburikidza neGmail | IPhone nhau
Maitiro ekutumira iCloud zvinongedzo kuburikidza neGmail
Nekuvhurwa kweshanduro nyowani yeIOS, Apple inounza akati wandei emabasa, mabasa ayo dzimwe nguva anotora nguva yakareba kupfuura inodiwa nevashandisi kuwanikwa. Mwedzi mishoma yapfuura, Gmail yakazivisa kuti yaizounza kugona kwe batanidza mafaera akachengetwa muICloud, chinhu chinowanikwa mushure mekupedzisira kugadzirisa.
Kunyange hazvo basa iri ringaite kunge risinganzwisisike, yanga isingawanikwe muGmail, imwe yeanonyanya kushandiswa tsamba dzepasi. Outlook, tsamba yemicrosoft application inotipa iyi sarudzo zvisingaiti kubvira pakatanga iOS 13.
Kana zvasvika pakubatanidza mafaera muGmail, tine sarudzo mbiri:
Kuburikidza nechishandiso pachacho.
Kubva kuFiles application.
Isati yaburitswa yazvino Gmail gadziriso, zvaive zvisingaite kuwana magwaro ari muICloud kuburikidza neiyo Files app uye zvakare zvaive zvisingaite kugovera iyo iCloud faira kuburikidza neiyo Gmail app.
1 Tumira chinamato cheICloud kubva kuGmail
2 Tumira chidimbu cheICloud kubva kuFiles app neGmail
Tumira chinamato cheICloud kubva kuGmail
Chinhu chekutanga chatinofanira kuita kuvhura kunyorera uye tora pane + chiratidzo iri pazasi kurudyi rwechidzitiro.
Tevere, tinosarudza kubva kuaccount ipi yatinoda kuitumira (kana isu tine zvinopfuura imwechete zvakagadzirirwa) uye tinya pane clip kubatanidza mafaera.
Pazasi, hwindo richaratidzirwa kwatinofanirwa kudoma sosi yedata. Mune ino kesi, tinya pa Zvisungo.
Tevere, hwindo reFiles application rinozovhurika, kwatinogona kufamba kuenda tsvaga iyo faira ratiri kuda kuwedzera.
Tumira chidimbu cheICloud kubva kuFiles app neGmail
Kana tangovhura iko kunyorera Archives, isu tinowana iyo faira iyo yatinoda kugovera.
Tevere, tinotsikirira zvishoma pane iyo faira kusvikira iyo sarudzo menyu yataridzwa kwatinofanira sarudza Goverana. Tinogona zvakare kusarudza kudzvanya pane Sarudzo sarudzo, iri pakona yepamusoro yekurudyi, sarudza iyo faira uye tinya pane bhatani reKugovana iri mukona yezasi kuruboshwe.
Pakati pesarudzo dzese dzakaratidzwa, isu tinofanirwa Sarudza Gmail kuvhura otomatiki hwindo reGmail nefaira rakabatanidzwa uye kwatinofanira kungonyora iye anogamuchira, musoro uye muviri weshoko.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Maitiro ekutumira iCloud zvinongedzo kuburikidza neGmail
Iyo 5G yaunogamuchira inogona kunge isingamhanye sezvaunofungidzira
WhatsApp ikozvino inotsigira QR kutaurirana (mune beta)